Soomaaliya - Parent Network of WNY
Soomaaliya – Parent Network of WNY
Call (716) 332-4175
Taleefanka waxaa lagaga jabaawi doonaa Ingiriisi.
Fadlan sheeg baahida “lagaa taakulaynayo” sheegna “Luuqada aad doorbisayso”.
Khadka ayaa lagugu yara dayn doonaa ilaa inta lala xidhiidhayo turjumaankii kaa kaalmaynayay su’aashaada. Nidaamkani waxay uu qaadan doonaa wakhti yar e, fadlan khalka ku jir.
Marka uu turjumaanku ku soo biro khadka, Khabiirka taakulada ee Dalada Waalidka ee WNY ayaa hagi doona sheekada, waxaanu ku siin doonaa tilmaamaha gaarka ah ama kaalmada aad u baahan tahay. Turjumaanka waxaa lagu tobobaray in uu ku celiyo oo kaliyah waxa la yidhaahdo, balse maaha mid bixinaya tilmaamo ama talo.
Hadii aanu joogin khabiirka taakuladaayada Dadalda Waalidka ee WNY, fadlan fariin noo reeb ama iimeel noosoo dir aad noogu sheegeyso “baahidaada” iyo “luuqada aad doorbidayso”. Waxaad noo reebtaa taleefan lambarkaaga iyo wakhtiga aad doorbidayso in aanu kugu soo celino. Khabiirka taakulada oo uu weheliyo turjumaan ayaa kula soo hadli doona si uu kaaga caawiyo su’aalahaaad qabto. Halkan Riix su aad u doorato luuqada aad doorbidayso.
Ilmahaagu waxa uu xaq u leeyahay waxbrasho dugsi shicib oo munaasab ah bilaa lacagna ah.
Waxaad xaq u leeyahay inaad go’aan kasta oo ilmaha waxbrashadiisa laga qaadanayo aad qayb ka noqoto, taas oo ay kamid tahay nidaamka lagu ogaanayo in uu ilmahaagu u baahan yahay adeeg gaar ah.
Waxaad in aad si fiican u dheehataa xuquuqda ilmahaaga. Xuquuqahan waxaa heef federal sugay Sharciga Waxbarashada Shakhsiga Laxaadka La’ (IDEA).
Adigaa ilmahaaga si fiican u garanaya, markaa waa in kaalintaada heer kasta la qiraa.
Xanuunada neerfayaashu waa xanuuno ku dhaca nidaamka neerfayaasha jidhka. Kuwaas oo keena khalkhal ku yimaada nidaamka, dheecaanada ama eleftiriiga maskaxda, laf dhabarta ama neefo kale oo calaamado badan leh. Hay’ada Caafimaadka Adduunku waxay ku qiyaastay sanadkii 2006 inay ilaa hal bilyan oo ruux dunida maanta qabaan xanuunada neefhaha kuwaas oo la ildaran(si toos ah ula il daran).
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Waxbarashada Gaarka ah, DejisoSpecial Education, 504 Plan and IEP Development fact sheets.
Si aad xog dheeraad ah uga hesho Kala Guurka, Dajiso fact sheet